Elokenz: avereno am-pahalalana ny atiny fampisehoana tsara indrindra amin'ny tranokalanao | Martech Zone
Ny mpivarotra dia mamorona voajanahary ary mino aho fa indraindray dia manimba ny fahombiazan'ny orinasany. Zavatra iray izay ampahatsiahiviko ahy hatrany amin'ny lahatsoratro. Matetika aho no milentika lalindalina kokoa amin'ireo fitaovana sy paikady… ary hadinoko fa misy mpitsidika izay tsy niaraka tamin'ity dia ity niaraka tamiko.
Ho an'ny orinasa, fanaraha-maso goavambe io. Rehefa manohy mamolavola sy mamoaka atiny izy ireo dia adinon'izy ireo fa misy olona sasany izay mety tsy mahalala akory ny sehatra misy azy ireo na ny atiny tsara mety navoakan'izy ireo tamin'ny volana lasa, tamin'ny taon-dasa, na koa izay antitra izay manome ny vaovao ilainy.
Antony iray lehibe manosika ny mpanjifanay hampiasa (sy hivoatra izahay) a tranomboky atiny amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny paikadin'ny tranomboky atiny dia manome antoka fa ny ekipa mpivarotra anao dia mifantoka hatrany amin'ny lohahevitra, indostria, dingana ary olona isaky ny mpitsidika tonga eo amin'ny tranokalanao. Ny asanao dia tsy ny famokarana renirano atiny vaovao tsy misy farany… mba hahazoana antoka fa manana tranomboky feno ianao izay nohatsaraina sy nohatsaraina rehefa mandeha ny fotoana.
Famerenana amin'ny laoniny ny media sosialy
Fanaraha-maso iray hafa dia ny media sosialy. Ny fandefasana amin'ny haino aman-jery sosialy indraindray dia toa tsy mahomby… fa ilaina izany satria ilay mpanaraka azonao tamin'ny volana lasa dia mbola tsy namaky sy nanindry ny fanavaozana ny haino aman-jery sosialy nandritra ny taona lasa. Mila mitandrina ny atiny media sosialy toy ny renirano boribory koa ianao… mampiroborobo ny tranombokinao amin'ny mpanaraka amin'ny dingana rehetra amin'ny diany (fa tsy anao).
Tsy tsotra anefa izany. Raha manamboatra filaharana ianao ary mampakatra fanavaozana ara-tsosialy hahatratra hatrany hatrany ny mpihaino anao… mety hitarika azy io harerahana ara-tsosialy. Ny havizanana ara-tsosialy dia mety hanimba taonina ny marikao amin'ny alàlan'ny fandaozana ny fandaozana ary ny fananan'ny mpanaraka anao handao anao satria tsy mahita lanjany amin'ireo lahatsoratra miverimberina ataonao. Ny reposts manan-tsaina dia lakile - mahatonga azy ireo ho ara-potoana fa tsy dia matetika loatra… mifangaro votoaty vaovao sy mamelombelona matetika ny atiny taloha hamporisihana ny firotsahana.
Elokenz dia filaharana feno famahan-tsaina sy famenoana auto izay mamakafaka ny atiny, mianatra izay atiny inona no tsara zaraina arakaraka ny fihetsiky ny mpihaino anao, ary manapa-kevitra izay atiny hozaraina manaraka amin'ny sehatra media sosialy tsirairay.
Miasa amin'ny dingana tsotra 4 i Elokenz:
Manafatra atiny iray - ny atiny dia ampidirina ao amin'ny Elokenz ary aseho ao amin'ny tranombokin'ny fitaovana.
Misafidiana kaonty media sosialy - safidio ireo sehatra haverina hamoahana ny lahatsoratrao. Elokenz dia mikarakara ny fampiroboroboana ny atiny.
Mamorona fanavaozam-baovao maro - Elokenz dia ahafahanao mamorona karazany maro araka izay itiavanao isaky ny sehatra. Ny fitaovana dia hisafidy kinova hafa isaky ny averina alefa indray ny lahatsoratrao.
Fakafakao ny ahatongavanao ary hatsarao ny atiny - ny sehatra dia manome hery ny mpivarotra hahita ny karazana atiny ary izay fanavaozana no nety indrindra mba hisarihana mpitsidika vaovao ary hitondra fitarihana maro kokoa.
Tiako ny mampiasa an'ity fitaovana ity - mora ny manomana fizarana sosialy amin'ny tranokala Elokenz amin'ny RSS feed izay namboariko. Tiako ny fanadihadian'izy ireo ka hitako izay mandeha amin'ny tambajotra sosialy tsirairay. Azonao atao ny manova haingana ny anjaranao tsirairay avy!
Lisa Sicard, mitaona aingam-panahy hivoatra
Elokenz manampy anao hamonjy fotoana amin'ny asa sosialy isan'andro sy hahatratra mpanjifa bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny atiny arak'izay tratry ny heriny. Raha tsy hiteny ianao dia hampitombo ny fiverenan'ny fampiasam-bola isaky ny lahatsoratra izay hitarika fifamoivoizana sy fitarihana!
Atombohy ny fitsapana anao Elokenz mandritra ny 30 andro
Fampahalalana: mpiara-miasa aho na Elokenz.
Tags: fotoana tsara indrindra handefasanafizarana atinytranomboky atinyelokenzFacebookLinkedInRepostfandaharam-potoanafandaharam-potoana atinyfandaharam-potoana handefasana lahatsoratra media sosialyharerahana ara-tsosialyhaino aman-jery sosialyfilaharana media sosialylahatsoratra sosialyTwitter
Freshcaller: Rafitra telefaona virtoaly ho an'ny ekipa mpivarotra lavitra